के मैले तिमीहरूलाई याद दिलाएको छैन र? तिमीहरू शङ्कालु नहोऊ; तिमीहरू मेरो कुरा नै सुन्दैनौ, तिमीहरू कस्तो विचारहीन मानिसहरू हौ! कहिले तिमीहरूले मेरो हृदयलाई बुझ्न सक्षम हुनेछौ? हरेक दिन नयाँ अन्तर्दृष्टि आउँछ, अनि हरेक दिन नयाँ ज्योति आउँछ। कति पल्ट तिमीहरूले आफ्नो निम्ति यसलाई राम्रोसित बुझेका छौ? के म आफैले तिमीहरूलाई भनेको छैन र? तिमीहरू छोएपछि मात्रै चल्ने कीराहरू जस्तै अझै निष्क्रिय छौ, अनि तिमीहरूले मसित सहकार्य गर्न र मेरो बोझको निम्ति वास्ता देखाउन पहल गर्न सक्दैनौ। म तिमीहरू सबैको जीवन्त र मायालु मुस्कानहरू देख्न चाहन्छु, मेरा छोराहरूको सक्रिय र जीवन्त चालचलनहरू देख्न चाहन्छु तर म त्यसो गर्न सक्दिनँ। त्यसको साटो, तिमीहरू कमजोर बुद्धिका छौ—बेवकुफ र मूर्ख छौ। तिमीहरूले खोजी गर्न पहल गर्नुपर्छ। साहस पूर्वक पछ्याऊ! आफ्नो हृदयलाई खोल अनि मलाई तिमीहरूभित्र बस्न देऊ। सचेत र जागा होऊ! मण्डलीका केही मानिसहरूले मानिसहरूलाई धोका दिन्छन्, अनि तैँले यी वचनहरूलाई सधैँ ठूलो महत्त्व दिनुपर्छ, नत्र भने तेरो जीवन प्रभावित हुनेछ वा तैँले केही हानि भोग्नुपर्नेछ। निश्चिन्त बन्—तँसित जबसम्म खडा भएर मेरो निम्ति बोल्ने साहस हुन्छ, तबसम्‍म म त्यसको सबै बोझ बोक्नेछु अनि तँलाई शक्ति दिनेछु! जबसम्म तैँले तेरो हृदयलाई सन्तुष्ट तुल्याउँछस्, तबसम्‍म म सधैँ तँलाई मेरो मुस्कान र मेरो इच्छा देखाउनेछु। जबसम्म तँसित बलियो मेरुदण्ड हुन्छ र तँ नरबालकको स्वभाव जिउँछस्, तबसम्‍म म तँलाई सहायता गर्नेछु र तँलाई महत्वपूर्ण पदमा राख्नेछु। जब तँ मेरो सामु आउँछस्, तब मेरो नजिक आइज्। तैँले बोल्न नसके पनि नडरा। जबसम्म तँसित खोजी गर्ने हृदय हुन्छ, तबसम्‍म म तँलाई वचनहरू दिनेछु। मलाई मधुर सुनिने वचनहरू चाहिँदैन अनि मलाई तेरो चापलुसी चाहिँदैन; यस्तो प्रकारको कुरालाई म सबैभन्दा बढी घृणा गर्छु। यस्तो प्रकारको मानिसलाई नै म सबैभन्दा बढी घृणा गर्छु। तिनीहरू मेरो आँखामा पसेको छेस्को जस्तो वा मेरो शरीरमा बिझेको काँडा जस्तो हो जसलाई निकाल्‍नैपर्छ। नत्र भने मेरा छोराहरूले मेरो निम्ति शक्ति चलाउन सक्दैनन् अनि तिनीहरू निसासिने नियन्त्रणको वशमा हुनेछन्। म किन आएको छु? म मेरा छोराहरूलाई आड दिन र उत्साह दिन आएको छु, ताकि उत्पीडन, हेपाइ, निर्दयता र दुर्व्यवहार सहनु पर्ने तिनीहरूका दिनहरू सधैँको निम्ति जाऊन्!
साहसी होऊ। म सधैँ तिमीहरूसित हिँड्नेछु, तिमीहरूसित जिउनेछु, तिमीहरूसित बोल्नेछु र तिमीहरूसित काम गर्नेछु। नडराऊ। बोल्नका निम्ति नहिचकिचाऊ। तिमीहरू सधैँ भावुक, कायर र भयभीत हुन्छौ। जो मण्डलीको निर्माणको निम्ति हितकारी हुँदैनन्, तिनीहरूलाई हटाइनुपर्छ। यसमा मण्डलीमा भएका ती मानिसहरू पनि समावेश हुन्छन् जसको अवस्था राम्रो छैन, अनि जसले मेरा वचनहरू अनुसार काम गर्न सक्दैनन्, तिमीहरूका अविश्‍वासी आमाबाबुको त कुरै नगरौं। म ती कुराहरू चाहँदिन। तिनीहरूलाई जरैसहित उखालिनुपर्छ अनि कोही पनि रहनु हुँदैन। तेरो हात र पाउको बन्धनहरूलाई मुक्त गरिदे। जबसम्म तैँले तेरा आफ्नै अभिप्रायहरूलाई जाँच्छस् अनि ती अभिप्रायहरू फाइदा र हानिसित सम्बन्धित हुँदैनन्, ख्याति र धनसित, व्यक्तिगत सम्बन्धहरूसित पनि सम्‍बन्धित हुँदैनन्, तब म तँलाई साथ दिनेछु, तँलाई कामकुराहरू औँल्याइदिनेछु र सधैँ स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नेछु।
ए, मेरा छोराहरू! मैले के भन्‍ने? मैले यी कुराहरू भने तापनि, तिमीहरू अझै मेरो हृदयलाई ध्यान दिने भएका छैनौ, अनि तिमीहरू अझै कायर छौ। तिमीहरू केदेखि डराउँछौ? किन तिमीहरू अझै व्यवस्था र नियमहरूद्वारा बाँधिएका छौ? मैले तिमीहरूलाई मुक्त गरिदिएको छु तर तिमीहरूसित अझै स्वतन्त्रता छैन। किन यस्तो भयो? मसित अझ धेरै कुराकानी गर् अनि म तँलाई बताउनेछु। मलाई नजाँच। म वास्तविक छु। मसित कुनै बहाना छैन; सबै वास्तविक छ! मैले जे भन्छु, त्यो साँचो हुन्छ। म कहिल्यै मेरो वचन फिर्ता गर्दिनँ।